यसकारण हामीले भारतीय न्युज च्यानल बन्द गर्‍यौं – Jagaran Nepal
यसकारण हामीले भारतीय न्युज च्यानल बन्द गर्‍यौं
मेरो जन्म नेपालमा भयो । तर, बाल्यकाल भारतमै बित्यो । त्यस कारण पनि मेरो भारतसँग आत्मीय सम्बन्ध छ । मेरो भारतीय व्यवसायीहरुसँग राम्रो सम्बन्ध छ र उनीहरुसँग नियमित रुपमा व्यवसाय गरिरहेको छु । मेरा भारतीय साथीहरूको सङ्ख्या पनि धेरै छ, जुन हामीबीच घनिष्ट आत्मीय सम्बन्ध छ, जुन व्यापार र राजनीति भन्दा पनि माथि छ।
वर्तमान अवस्थामा हामीले किन भारतीय न्युज च्यानलहरूको प्रसारणलाई रोक लगायौं ? भनेर धेरै व्यक्तिले मलाई प्रश्न सोधेका छन् । कसै-कसैले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि हनन भयो, कतिपयले उपभोक्ता अधिकारहरूको बारेमा कुरा गरेका छन् । म सबैलाई यो भन्न चाहन्छु कि भारतीय कानुनमा समेत अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा पनि उचित प्रतिबन्ध रहेको भए पनि दुर्भाग्यवस केही भारतीय न्युज च्यानलहरूले भारतीय कानुनको धज्जी उडाउँदै आफ्नो सीमारेखा पार गरिरहेका छन् र नेपालका बारेमा अनावश्यक भ्रम फैलाउने काम गरेका छन्।
हामी पनि गलत हुन सक्छौं । तर, एक जेष्ठ नागरिक, जसको सात दशकको जीवन अनि दुई मिर्गौला दुईपटकसम्म प्रत्यारोपण गरेका ब्यक्तित्व, जो एकदमै सम्मानयोग्य नेपालको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । नेपाल तथा नेपालको नेतृत्व गरिरहनुभएका हाम्रो प्रधानमन्त्रीलाई जोडेर अर्को देशका प्रतिष्ठित व्यक्तिसँग कुनै अव्यसायिक सम्बन्ध छ र देशको अहित हुने काम गरिरहेको छ भनी रिपोर्ट बानाउने, तथ्य र आधारहीन कुरालाई प्रसारण गर्ने, देश र प्रधानमन्त्रीका बारेमा गैरजिम्मेवारी टीकाटिप्पणी गर्ने जस्ता कार्यहरुलाई कुनै पनि देशले कसरी लिनुपर्छ ? हामी नेपालीले यस्ता गैरजिम्मेवारीपूर्ण कार्यहरुलाई कदापि स्वीकार गर्न सक्दैनौं।
म मेरा भारतीय साथीहरूलाई सोध्न चाहन्छु कि नेपाली च्यानलहरुले अरु देश तथा त्यस देशका नागरिकका बारेमा अनावश्यक विवादास्पद टीकाटिप्पणी गरेको सुनेका छौ ? हामी नेपाली कति सभ्य र शिष्ट रहेछौं भन्ने कुरा मलाई अहिले आएर थाहा हुँदैछ।
पछिल्लो २० वर्षदेखि म केवल टेलिभिजनको व्यवसायमा छु । यति लामो अवधिमा त्यस्तो क्रुर अनि विकृति फैलाउने कभरेज कहिल्यै भएको मलाई थाहा थिएन।
नेपाल सरकारले हामीलाई दिएको डाउनलिंकिङ इजाजतपत्रमा स्पष्ट रूपमा भनिएको छ कि हाम्रो देशलाई मान्य नहुने कुनै पनि राष्ट्र विरोधी वा देशद्रोही सामग्री प्रसारण गर्न मिल्दैन । हाम्रो विवेक र जिम्मेवारी प्रयोग गर्दा हामी कसरी गलत छौं ? किनभने, हामी व्यापारीहरू हौं, यसको मतलब यो होइन कि हामीसँग देशभक्ति वा आत्म सम्मान छैन।
म सरकारको आलोचक हुन सक्छु र म उनीहरूसँग धेरै कुराहरूमा भिन्न पनि हुन सक्छु । त्यसैले मेरो व्यवसायलाई अघि बढाउन र व्यवसाय बचाउनका लागि सरकारसँगको मेरो धारणा अलग हुन सक्छ । तर, अरु मेरो देशका बारेमा आँच आउने किसिमले बोल्ने कसैको अधिकार छैन।
म मेरा भारतीय साथीहरूलाई सोध्न चाहन्छु कि नेपाली च्यानलहरुले अरु देश तथा त्यस देशका नागरिकका बारेमा अनावश्यक विवादास्पद टीकाटिप्पणी गरेको सुनेका छौ ?
जुन मिडियामा प्रसारण भएका स्रोत, प्रसंग र एजेन्डा सबै सरासर गलत अनि मिथ्या छन् । कसैलाई पनि मेरो देश र मेरो देशभित्रका व्यक्तिहरुका बारेमा नक्कली समाचार सम्प्रेषण गर्ने अधिकार छैन।
दोस्रो कुरा, यहाँ भारतीय न्युज च्यानलहरुको प्रसारण समाग्रीका कारणले नेपाली जनमानसमा आ’क्रोश पैदा गरेको छ र हामीले ठूलो अपराध नै गरेजस्तो गरी आरोप लागिरहेको अवस्थामा हामी किन चुप बस्ने ? भारतीय न्युज च्यानलहरुले गरेको गल्तीको भागिदार हामी किन हुने ? त्यसैले, जसले गल्ती गर्छ, उ नै भागीदार हुनुपर्छ भन्ने वास्तविकतालाई बुझी प्रसारण बन्द गरेका हौं।’
पत्रकारिता वास्तवमा सत्य कुराको निडर भई खोजी गरी वास्तविकता बाहिर ल्याउने कार्य हो । र यो पनि सत्य हो कि भारतको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता र अखण्डतामा निडर भई ठूलो सङ्ख्यामा नेपालीहरुले रगतको बलिदानी गरिरहेका छन् । हाम्रा हजारौं गोरखाली दाजुभाइहरू भारतीय सीमा सुरक्षामा तैनाथ छन् । इतिहासदेखि हालसम्म हामी कहिल्यै पनि कसैको दास भएका छैनौं भन्ने कुरा सारा विश्वलाई थाहा छ भन्ने कुरा म नेपालविरोधी सबै भारतीय न्युज च्यानलहरुलाई पनि जवाफ दिन सक्छु।
त्यसैले हामी कसैको पनि दासत्व महसुस गर्दैनौं । भारत, चीन वा अन्य जुनसुकै देशका लागि हामी स्वतन्त्र छौं, हाम्रो राज्य स्वतन्त्र छ । भारतीय न्युज च्यानलहरु बन्द गर्ने निर्णयका पछाडिको कारण गैरजिम्मेवारीपूर्ण प्रसारण समाग्री नै हो । वास्तवमा यो हो कि हामी भारत र भारतीय व्यवसायीहरुसँग आपसी सम्मानका आधारमा घनिष्ठ सम्बन्ध निर्माण गर्न चाहन्छौं।
म एक हिन्दु परिवारबाट आएको हुँ र विदेशबाट नेपालमा रिपोर्टिङ्ग गर्न आउने मिडियालाई विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्दछु, नेपालको राष्ट्रियता सबैभन्दा ठूलो छ । त्यसैले यसका बारेमा एकदमै विचार गरेर पत्रकारिता गर्नुहोस् । म हृदयबाटै साथीहरू बनाउन र बन्न चाहन्छु । तर, कृपया मलाई त्यो ठाउँ दिनुहोस्।
हामीले सोचेका थियौं कि आवाजलाई शटडाउन गरेर बस्नुपर्दाको परिणाम के होला ? तर, हामी अब चुप बस्दैनौं । त्यसैले कृपया अपुष्ट, आधारहीन र तथ्यहीन स-साना पृष्ठहरुको पत्रकारिता नगर्नुहोस्। नेपाल सरकार तथा मेरा प्रिय साथीहरु, म तपाईलाई ‍विनम्रतापूर्वक हात जोडेर भन्छु कि हामी प्रसारण सामग्रीको वाहक मात्र होइनौं । हामी त्यस्ता गैरजिम्मेवारपूर्ण प्रसारण सामग्रीको निगरानी गरी त्यस्ता गैरजिम्मेवारपूर्ण प्रसारण सामग्रीको रोक पनि लागाउँछौं।
विशेष गरी इन्टरनेट (अनलाइन) को माध्यमबाट प्रसारण हुने त्यस्ता गैरजिम्मेवारपूर्ण सामग्रीमा पनि रोक लगाउनु अबको आवश्यकता बनेको छ । सबैले भन्नुपर्छ, हामी त्यस्ता गैरजिम्मेवारपूर्ण सामग्रीहरु प्रसारण गर्दैनौं । म तपाईंलाई विनम्र अनुरोध गर्दछु कि तुरून्त हाम्रो र राष्ट्रको मर्यादामा आँच पुर्याउने कुनै पनि प्रसारण समाग्री प्रसारण नगर्नुहोस्।
कानुनको नजरमा सबै बराबर हुन्छन्, चाहे इन्टर्नेट सेवा प्रदायक वा टेलिभिजन सेवा प्रसारक नै किन नहोस् । त्यसैले अब हामी सम्पूर्णले राष्ट्र र राष्ट्रियताका विषयमा सोच्ने समय आएको छ। अब, हाम्रो देश नेपालको आत्म सम्मान र नेपालीको मान सम्मानको रक्षामा हामीजस्ता इन्टर्नेट सेवा प्रदायक र केवल टीभी प्रसारकको महत्त्वपूर्ण भुमिका रहेको छ। (अनलाइनखबर)